राजनीतिको बुख्याँचाजस्तो तस्वीर
१. राजनीति हो कि बुख्याँचा हो, जनताले अत्तोपत्तो पाएकै छैनन् । संविधान सबैले लेखे, घोषणा एउटाले ग¥यो । चुनाव अर्कोले गरायो । दुई तिहाई बहुमत बामपन्थीले ल्यायो र सरकार बनायो । तर पार्टीको आन्तरिक कलह, दम्भ र अहमताले सरकार गयो । बामपन्थी रामपन्थी भयो अनी जनादेशमाथि परमादेशको हैकम चल्यो । दलीयतामा निर्दलको अभ्यास हुने भयो । कस्तो लोकतन्त्र ?
२. अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्यो । शेरबहादुर देउवाले विश्वाशको मत नपाए ७६(७) अनुसार संसद भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन गराउँछन् कि बुढानिलकण्ठ फर्कन्छन् ? मोर्चा भन्छ– अर्लि इलेक्सन हुनसक्छ । विश्वासको मत पाइन्छ ।
पक्षमा भन्दा विपक्षीमा बहुमत देखियो भने हुने के हो ? कोही बोल्दैनन् ।
यस्तै कुत्सित नियत राखेर शुरू नियुक्तिमा धारा ७६(५) उल्लेख नगरेको होइन होला ? संविधानको धारालाई सर्सर्ति हेर्दा तत्काल निर्वाचनमा जान्छ । तर अदालतको ब्याख्या र संसदबाट सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहेसम्म संसद विघट्न गर्न नमिल्ने प्रावधान हेर्दा विपक्षले प्रम दावी गरे फेरि धारा ७६ को प्रक्रिया शुरू हुन्छ कि हुन्न होला ? उत्कृष्ठ संविधानको अचम्मको अभ्यास, खिचलो मात्र हुने देखिन्छ ।
३. अचम्मको कोरोना– राजनीति गर्नेको भीडभाडमा कोरोना सर्दैन ? उनीहरू सरकारको आदेश मान्दैनन् । राजनीति गर्नेले जति भीडभाड गरे हुन्छ ।
कोरोना पनि जहाजमा यात्रा गर्नेलाई नसर्ने रहेछ । गाडीमा आवत जावत गर्नेलाई सर्छ रे । लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनमा पनि प्रहरीलाई घूस दिए सर्दैन, घूस नदिए सर्छ । कोरोनाको लहर प्रहरी र दलालहरूलाई राम्रै लाभ गराइरहेछ ।
४. बलात्कारको बिगबिगी– राजधानीबाट बुटवल हिँडेकी युवतीलाई वीरगञ्ज पु¥याइयो, ट्रकचालक र सहचालकले तीन दिनसम्म बलात्कार गरिरहे । काखमा २ वर्षे नानी च्यापेर रूकुम हिडेकी महिलालाई ना ५ ख २८७० नम्बरको ट्रकका ड्राइभर सुनिल महतोले भाडा लिन्न लगिदिन्छु भनेर सिटमा राख्यो र कलंकीबाट हिडेको ट्रक ड्राइभरले आधा बाटोमै बलात्कार ग¥यो । त्यसपछि वीरगञ्जसम्म लगेर पटक पटक बलात्कार गरियो । बलात्कारको बिगबिगी छ, प्रहरी लकडाउनको मौकामा अशुली धन्दामा लागेको छ । कारवाही केही हुँदैन ।